कस्तो कानको कस्तो भाग्य, कानले नै बताउँछ तपाई कति भाग्यमानी ? « Swadesh Nepal
कस्तो कानको कस्तो भाग्य, कानले नै बताउँछ तपाई कति भाग्यमानी ?
मानिसहरुले कानको काम सामान्य रुपमा सुन्ने मात्रै भनेर बुझ्छन् । र खासमा कानले सुन्ने बाहेक अन्य काम गरेजस्तो पनि लाग्दैन । तर समुद्र शास्त्रमा भने कानले गर्ने कामबारे थप व्यख्या गरिएको छ । समुद्र शास्त्रका अनुसार कानले मानिसको भाग्य र व्यक्तित्व समेत बताउँछ ।
जुन व्यक्तिको कान जन्मजात नै लामा हुन्छन् तिनीहरुको आयू लामो हुने समुद्र शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्तै लामा कान हुने व्यक्तिहरुले जीवनमा धेरै संघर्ष गर्नुनपर्ने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ । चेप्टो कान भएका व्यक्तिहरु भने भिन्न खालका हुन्छन् । उनीहरु भोग विलासी स्वभावका हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै कानको लोती अत्यन्तै छोटो भएका व्यक्ति मितव्ययी र धन बचाउने स्भावका हुन्छन् । यस्ता कान भएका व्यक्तिहरु मिलनसार हुने समेत शास्त्रमा उल्लेख छ । कालो र सुख्खा देखिने कान भएका व्यक्तिलाई भने शास्त्रले नराम्रो भनेको छ । यस्ता कान भएका व्यक्तिले जीवनमा अधिकांश समय आर्थिक अभावको समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।